မန္တလေးအဓိကရုဏ်း အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မိတ္တီလာ သာယာကုန်းဗလီကို အကြောင်းပြချက်မပေးပဲ အချိန်အကန့်အသက်မရှိပိတ်
မန္တလေး ပဋိပက္ခနှင့် ရလဒ် သုည၊ အနာဂတ် သုည »
ဒီအစီရင်ခံစာကို တည်းဖြတ်သူ၊ တရားမျှတမှုအဖွဲ့ (Justice Trust)ရဲ့ ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် မန္တလေးမြို့က ရှေ့နေဦးသိန်းသိန်းဦးက “တနိုင်ငံလုံးမှာရခဲ့တဲ့ သက်သေအထောက်အထား တွေ၊ ဖြစ်စဉ်တွေက ပုံစံတူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီ ဘာသာရေးအရေးအခင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဆန့်ကျင်ရေး ဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေက တပုံစံတည်း ဖြစ်တယ်။
အဲဒါတွေက မန္တလေးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကလည်း တကယ်ကတော့ သတင်းဌာန သစ်ထူးလွင်ဆိုတဲ့သတင်းဌာနက မမှန်သတင်း ထုတ်လွှင့်လှုံ့ဆော်တာတွေနဲ့ အတူတူပေါ့နော် ပူးပေါင်းကြံစည်တဲ့သူတွေ ပါဝင်တယ်။ ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့သူတွေ ပါဝင်တာမှ နောက်ကွယ်က အကွက်ချပြီးတော့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ရောယှက်ပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းကို မကြီးကြီးအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကို နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကလည်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ထားတယ်။ ကျနော်တို့ရတဲ့ အချက်အလက်တွေက တွေ့ရတယ်။ နောက်ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့လူတွေက ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ မန္တလေးမြို့သားတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်စဉ်တိုင်း ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာ ပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေဟာ သူစိမ်းတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဒီအချက်ကို ၀န်ခံရပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး သူရဦးရွှေမန်းလည်း ဒီအချက်ကို ထောက်ပြတယ်။ ဒီအချက်တွေက ကျနော်တို့ ရရှိတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ ဒီပြင် ဗမာပြည်ထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံစံတူကိစ္စတွေအားလုံးကို ချုပ်လိုက်တော့ ကျနော်တို့ရခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံအထောက်အထားအပါအ၀င် အချက်အလက်တွေက အဲဒီကိစ္စကို လှုံ့ဆော်သွားတာဟာ မန္တလေးကလူတွေ မဟုတ်ဘူး။ သာမန်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ အကွက်ကျကျ အစီအစဉ်တကျ စီစဉ်သွားတာလို့ ထုတ်ပြောရင် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ” လို့ ပြောပါတယ်။
This entry was posted on March 24, 2015 at 11:55 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.